Holland oo Iran ku eedeysay in gangs-ka dambiyada abaabulan u adeegsadaan dilalka mucaaradka… – Hagaag.com
Holland oo Iran ku eedeysay in gangs-ka dambiyada abaabulan u adeegsadaan dilalka mucaaradka…
Posted on 11 Janaayo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Holland ayaa sheegtay in Iran ay bilowday in gangs-ka dambiyada abaabulan u adeegsatay dilalkii labo qofood oo mucaarad ku ahaa Iran oo degganaa dalkeeda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Holland, Stef Blok ayaa ku sheegay khudbad uu ka jeediyey baarlamaanka in sirdoonka Holland “ay hayaan cadeyn ku filan ku lug lahaanshaha Iran dilka labadaasi qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran, laakin heysta dhalashada Holland, midkood magaalada Almere ayaa lagu dilay 2015, kan kalena magaalada Den Haag 2017”.
Waxa uu ku daray khudbadiisa oo sidoo kale wax ka saxiixday wasiirka arrimaha gudaha Holland Kajsa Ollongren “waxay labada qofood ku ahaayen nidaamka Iran mucaarad”, waxay kala ahaayeen Ahmed Mola Nissi iyo Ali Motamed.
Xukuumadda Dutch-ka ayaa sheegtay in qaabka loo fuliyey dilka Nisi ee sannadkii 2017 ay la mid aheyd dilkii muwaadin kale oo mucaarad reer Iran ah oo ka dhacay Holland, Mohammad Reza Kulahi, oo sidoo kale lagu dilay gurigiisa hortiisa isagoo bistoolad codkeeda la maqleyn loo adeegsaday magaalada Amsterdam.
Holland ayaa wadankeeda ka ceyrisay labo diblomaasi Irani ah sanadkii hore iyada oo ayna shaacin sababta, in ay xiriir la lahaayeen dilalka mucaaradka Iran iyo in kale.